नेपालगञ्जमा विद्युत अनियमित हुँदा, जनजीवन कष्टकर
बाँके / नेपालगञ्जवासीले तातो हावा र चर्को गर्मी झेलिरहेका छन् । घरभित्र पनि आरामसँग बस्न सक्ने अवस्था छैन । विद्युत् अनियमितता उस्तै छ । चर्को गर्मीमा विद्युत्मात्रै नियमित भइदिने हो भने धेरै राहत हुन्थ्यो । विद्युत् नियमितताका लागि पहल पनि भइरहेको छ । तर, चर्को गर्मीका बेला विद्युत् अनियमितता झन् बढ्दै गएको छ ।
प्रत्येक वर्ष गर्मीमा हुने अनियमितताको समस्या यस वर्ष पनि समाधान भएको छैन । कहीँकतै मर्मत गर्नुपरे नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रले विद्युत् अनियमित हुने समयको जानकारी दिन्छ । तर, त्यसबाहेक हुने अनियमितताको सूचना प्राधिकरणले दिने गरेको छैन । विद्युत् किन अनियमित भएको हो भन्ने जानकारी पाउन सकिँदैन”, नेपालगञ्ज–५ की सुमित्रा भट्टराई भन्छिन्, “गर्मीमा प्राधिकरणले थप पीडा दिन्छ ।
दिनभर चर्को गर्मी सहने नेपालगञ्जवासी रातिको समयमा अनियमित विद्युत्का कारण राम्रोसँग निदाउन सक्ने अवस्था छैन । दिनभर गर्मीमा काम गर्छौ, विद्युत् गइरहँदा राम्रोसँग सुत्नसमेत पाइएको छैन”, अटोरिक्सा चालक दिनेश काँदु भन्छन् । एक घण्टामा दुईरतीन पटकसम्म विद्युत् काटिने गरेको रुस्तम अली बताउँछन् ।
कम्तीमा लोडसेडिङको जानकारी भए त्यसैअनुसार योजना बनाउन सकिन्थ्यो”, उनले भने । पूर्वसूचनाविना हुने विद्युत् अनियमितताले मेसेनरी औजारमा पनि क्षति पुग्ने गरेको उद्योगी, व्यवसायी बताउँछन् । चलिरहेको मेसिन एक्कासी पटक/पटक बन्द हुँदा बिग्रने सम्भावना बढ्छ”, नेपालगञ्ज–१८ का दिपेश आचार्य भन्छन् ।
लोडसेडिङको विकल्पमा जेनेरेटर र इन्भटर जडान गरिए पनि लामो समय विद्युत् अवरुद्ध हुँदा ती उपकरणले धान्न सक्ने अवस्था हुँदैन भने अर्कोतिर लागतसमेत बढ्न जाने आचार्य बताउँछन् । विद्युत् अनियमितताले होटल व्यवसायीको पनि लागत बढ्दै गएको हो । जेनेरेटरको प्रयोग गर्दा आउने लागतका कारण अनावश्यक नोक्सानी व्यहोर्नुपरिरहेको होटल व्यवसायीको भनाइ छ ।
नेपालगञ्जका लागि भारत र नेपाल दुवै तर्फबाट विद्युत् आपूर्ति हुने गरेको छ । गर्मीमा नेपालगञ्जमा २४ एमभीएसम्मको विद्युत् माग हुने गरेको छ । जसमा १२ एमभीएसम्मको विद्युत् भारतबाट प्राप्त हुने गरेको छ । ह्वात्तै बढ्ने माग र आपूर्तिको कमीले विद्युत् अनियमित हुने गर्छ ।
वर्षा नहुँदासम्म यहाँको तापक्रम घट्ने सम्भावना देखिँदैन । विद्युत् नियमित नहुँदा उखरमाउलो गर्मीले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । दिनहुँ घण्टौँसम्म बिजुली हुँदैन । लोडसेडिङ अन्त्य भएको भनिए पनि दैनिक तीनरचार घण्टा बत्ती गइरहेको छ । औषतमा यहाँको तापक्रम ४२ डिग्री सेल्सियस आसपास नै हुन्छ । छिटपुट पानी परे पनि वर्षा भएको छैन, स्थानीयवासी गर्मीले आक्रान्त छन् ।
गर्मी बढेसँगै खरबुजा, काँक्रा, उखुको रस, लस्सीलगायतका पेयपदार्थको व्यापार फस्टाएको छ । गर्मीका कारण आवश्यक कामबाहेक मध्य दिउँसो सडकमा मानिसको चहलपहल पातलिएको छ । बाहिर हिँड्दा गर्मी र त्यसमा पनि ‘लु’ चल्ने भएपछि सडकमा मानिसको आवतजावत कम भएको छ । दैनिक मजदुरी गरेर खानेहरुका लागि गर्मीयाम निकै कष्टकर बन्न पुगेको छ ।
नेपालगञ्जका अस्पतालमा प्रदेश नं ५, साविक सुदूर र कर्णाली प्रदेशका साथै भारतका विभिन्न स्थानबाट पनि दैनिक बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । “तीमध्ये अधिकांश भाइरल र टाइफाइडका छन्”, भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. रुपानन्द अधिकारीले भने, “भर्ना भएका बिरामीमा पनि आधाभन्दा बढी भाइरल ज्वरो र टाइफाइडकै छन् ।
उनका अनुसार बालबालिकादेखि युवायुवती र वृद्धवृद्धासमेत प्रभावित भएका छन् । मानिसको चहल-पहल बढ्दै जानु, खानपानमा बेवास्ता गर्नुलगायतका कारण बिरामीको चाप बढेको डा. अधिकारीले बताए । गर्मीमा पूरै शरीर ढाक्ने गरी लुगा लगाउन र अत्यावश्यक कामबाहेक घर बाहिर ननिस्कन चिकित्सकको सुझाव छ ।